भड्किलाे भजनको आलोचना गर्दा, घर घेराउ र धम्की
१८४८४ पटक पढिएको
इटहरीः पुराणमा बजाएको भजन गलत भएको भन्दै फेसबुक स्टाटस लेख्ने युवतीको घर घेराउ भएको छ । पुराणमा बजाइने भजनको शैली गलत भएको भन्ने इटहरी–४ की दुर्गा गौतमको घर आयोजकले घेरेको हो ।
श्री पाथीभरा आमा भक्ति सेवा संस्थाको आयोजनामा भएको पुराणमा बजेको भजनको विषयमा उनले फेसबुकमार्फत् आलोचना गरेकी थिइन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘आश्चर्य त यो छ कि ! मन आनन्द हुन्छ भनेर पुराण सुन्न र भजनमा आनन्द लिन पाइन्छ भनेर पुराण लागेको स्थलमा गएको, कुनै पार्टी या डिस्कोमा गएको झैँ भयो, पण्डित वर्गलाई अनुरोध, भजनलाई विकृति नबनाइयोस्’ भनेकी छिन् ।
स्टाटसको विषयमा बारम्बार दबाब आउन थालेपछि भोलिपल्ट उनले अर्काे स्टाटस लेखिन् । त्यसमा ‘यो कर्म गर्ने दैनिकीमा अर्को एउटा जिम्मेवारी लिने मनशाय जागेर आयो, केमा त भन्दा, वैदिक सनातन धर्मसम्बन्धी अलि अध्ययन गर्ने र सकेसम्म अहिलेका पण्डित क्षेत्रका वरिष्ठ विद्वान व्यक्तिसँग रहेर अनुसन्धान गर्ने छु । किन त भन्दा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका जति पनि वाचकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्ने कोही व्यक्ति नभएको हुँदा वाहाहरु बढी स्वतन्त्र भएर आफूखुसी नियम बनाउन थालेको प्रतीत हुँदैछ ।’ भन्ने स्टाटस हालेकी थिइन् ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक २८ गते साँझमा घरमै आएर आफूलाई थर्काएको उनको आरोप छ । पुराणमा बजेको भजनले हिन्दू धर्मको अपमान गर्नुका अलावा गरिमा घटाउने काम गरेको भन्दा घर घेर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । सामान्य विषयलाई लिएर घरमै आएर धम्क्याउने काम भएको उनी बताउँछिन् ।
धम्कीपछि ‘कसैका धम्कीले यो छोरी डराउनेवाला छैन किनकि आफू सही भएपछि दुनियाँ का सबै जनशक्ति आएर पेल्ने प्रयास गरे पनि सामना गर्ने शक्ति मलाई मेरो ईश्वरले दिनुभएको छ,’ उनले स्टाटसमा भनेकी छिन् ।
अर्को स्टाटसमार्फत् उनले आफू र आमा मात्र भएको समयमा १५ जना जतिको समूहमा आफूलगायत आफ्नो दाइ सम्राटलाई सोध्दै आएको बताएकी छिन् । आयोजक टिमले आफूमाथि स्पष्टीकरण माग गरेको उनको भनाइ छ । स्टाटसको बारेमा आपत्ति भएपछि आयोजक घरैमा पुगेको हो ।
एउटा सामान्य प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर घरै घेर्न आउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । जिज्ञासा राख्दा उहाँहरूले मेरो घरै घेरेर मलाई धम्क्याउनुपर्ने हो कि पण्डितको हैसियत भएको मान्छेले साधारण केटीको प्रश्नको उत्तर दिएर या त कुनै माध्यमबाट मेरो बुझाइ कम भएको थियो भनेर बुझाउनु पथ्र्यो ? उनले प्रश्न गरेकी छिन् ।
आयोजक कमिटीकी एक सदस्य पाथीभरा दासीले अब फेरि पोस्ट ग¥यौ भने मैले जानेकी छु भन्दै धम्क्याएको अडियो रेकर्डमा पाइन्छ । गौतमले बारम्बार तपाईँप्रति यो प्रश्नको होइन भन्दा पनि मेरो आफ्नो पुराण भएको भनी पाथीभरा दासीले दाबी गरेकी छिन् ।
‘दासीले आफ्नो नाममा मुद्दा हाल्न जानसमेत सुझाएकी छिन् । सक्छेस् भने मलाई मुद्दा हालेर देखा,’ उनले भनेकी छिन्, ‘तँलाई तिमी भन्नुपर्ने केही कारण छैन । त्यसैले मेरो नाममा मुद्दा हाल्न जा ।’
फोनमा बोल्ने अर्का एक पुरुषले गौतमलाई डिप्रेसनको दबाइ खान भनेका छन् । त्यसै बीचमा दासीले फोन रेकर्ड गरेर राखे पनि आफूहरूलाई केही समस्या नहुने बताएकी छिन् । तिनै युवाले फोनमा कुकुरजस्तो नभुक्न र सक्ने भए पुराणस्थलमै आएर कुरा गर्न पनि भनेका छन् ।